I-KOMPREXX - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd
INDODA EPHAKATHI YOKUCINDEZELA
Amabhulukwe ethu okucindezelwa kanye nokugqoka kwezemidlalo kuyisixazululo esifanele sayo yonke imisebenzi yezemidlalo nokusebenza. Ukulingana okuqinile, okulingeneyo kunika ukwesekwa kwengxenye yonke engezansi yomzimba wakho. Uma ugqoke ama-leggings ethu asebenzayo noma ama-tight tights, kufana nokuba nepompo yokujikeleza emathangeni akho nama-glutes okuzokunika umfutho wokusebenza ngesikhathi sokuzivocavoca kwakho!
Indwangu ESEBENZELEKILE YOKUTHUTHUKISA
Ama-tight compression anqanda ukunyakaza kwemisipha ngokweqile okwenzeka ngesikhathi sokugijima, ukunweba, ukuhamba ngebhayisikili noma i-yoga ngenkathi ugcina amandla wokukunika ukusebenza okungcono nokukhuthazela okwengeziwe. Ziyi-leggings yokugcina yokucindezela noma amabhulukwe aqinile. Akunandaba noma ngabe uzivocavoca ini, igiya lethu lokuminyanisa lizokusiza ukuthi wenze okusemandleni akho!
Ubuhlungu obuncane, indwangu yokululama esheshayo
Ukusetshenziswa kwamabhulukwe okucindezela kunciphisa izinhlungu phakathi nangemva kwemisebenzi yomzimba eqinile, okuvumela ukuthi usebenzise isikhathi eside. Ukujikeleza kwegazi okuthuthukisiwe kusuka kumabhulukwe ethu okucindezela kuqinisekisa ukululama okusheshayo futhi kuvimbele ukukhathala.
Indwangu EMNANDI, YANDA INDUDUZO YENDUDUZO
Indwangu eyelulekayo yezindlela ezi-4 ikhethwe ngokucophelela ukuqinisekisa induduzo enkulu - ukucasuka noma ukushisa. Indwangu ibuye isuse umjuluko ngokushesha, igcina isikhumba sakho somile futhi sinethezekile. Izingubo zethu zokuzivocavoca kulula ukuzihlanza futhi zigcina ukwakheka kwazo nangemva kokuwashwa kaningana. Futhi, ukuthamba komzimba kukunika ukubukeka okuthophayo futhi kuyisengezo esamukelekayo ekhabethe lanoma ngubani.